[Saturday, December 8th, 12] :: Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo cambaareeyay qarixii Islii
Muqdisho (RH) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho ayaa ka hadlay qaraxii xaley ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay cambaareenayaan weerrarkaas oo lagu qaaday goob lagu cibaadeesto oo ah masaajid, isla markaana dadka ku dhaawacmay uu ku jiro xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Kaamakunji oo ka tirsan xaafadda Islii Yuusuf Xasan Cabdi.
"Waa wax laga murugoodo qarixii xaley ka dhacay,Islii dhibaatada ugu weyn ee Kenya u gaareyso khasaaraha waxa weeye siddee Soomaaliya ciidamo ugu dirteen u caawineysaan" ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xaafadda Islii waxa maanta ka dhacay howlgalo lagu qabqabtay Soomaali badan oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen qarixii xaley oo bilayska ku tilmaameen in uu ahaa mid gacanta laga tuuro.
Dhinaca kale, Madaxweynaha ayaa sheegay in ay tacsi u dirayaan dadka iyo dowladda Kenya isla markaana ay la qaysanayaan wixii ka dhacay xaafadda Islii.
Madaxweynaha ayaa ka hadlay socdaal afar cisho qaadatay uu ku tagay waddanka Turkiga, wuxuuna sheegay in kulamadii ay la qaateen madaxda dowladda Turkiga ay kusoo dhammaadeen guul iyo is-afgarad, isagoo sheegay inay Soomaaliya iyo Turkiga weligood lahaayeen xiriir qoto dheer oo kal iyo laab ah.
Wuxuu shaaca ka qaaday inay dowladda Turkiga la saxiixdeen heshiisyo la xiriira iskaashiga dhinacyada milateriga iyo dhaqaalaha. Madaxweynaha iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa horraantii bishan u duulay dalka Turkiga kaddib markii uu casumaad rasmi ah ka helay dhiggiisa Abdallah Gul.
Madaxweynaha oo wafdiga la socday ay ka mid ahaayeen wasiiradda arrimaha dibedda, gaashandhiga iyo maaliyadda.
Wafdiga madaxweynaha waxa garoonka ku soo dhaweeyay ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon, afhayeenka baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, wasiirro, xildhibaanno iyo xubno kale.